Kutanga kwakagadzirwa kubatanidza basa pakati pekuvhuraSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise | Kubva kuLinux
Ivo vanhu veOpenSUSE vatanga kufunga nezvekutanga kuchengetedza budiriro pamwe chete neshanduro dze openSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise uye ndizvo Gerald Pfeifer, SUSE technical director uye sachigaro wedare rinotarisa re openSUSE, syakaratidza kuti nharaunda ifunge chirongwa cheku kuunza pamwechete kuvandudza uye kuvaka maitiro eiyo OpenSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise kugoverwa.
Izvi zvakasimudzwa nekuti parizvino yakavhurikaSUSE Leap vhezheni yakavakirwa pa iyo yekutanga seti ye mapakeji eSUSE Linux Enterprise kugovera, asi openSUSE mapakeji yakarongedzwa zvakasiyana kubva kunobva mapakeji. Musimboti wechikumbiro ndechekubatanidza basa rekuvaka zvivakwa uye kushandisa yakagadzirira-kushandisa-mabhinari mapakeji kubva kuSUSE Linux Enterprise mune openSUSE Leap.
Nhasi ndine nhau dzinonakidza uye chirevo chekupa: SUSE inoda kutora rimwe danho mukuvhura kune yakavhurikaSUSE nharaunda uye inoratidza kutora iyo yakavhurikaSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise hukama kune imwe nhanho.
Mukati, iri zano rinodaidzwa kuti "Kuvhara mukana wekusvetuka" uye rinokurudzira kusimbisa nekubatana zvakanyanya.
Nzvimbo dzekuvandudza, nekutarisa pane yakavhurikaSUSE Leap senzvimbo yekuvandudza yenharaunda nevashandi veindasitiri.
Nharaunda dzevashandisi, nekutora mukana webhenefiti yeyakagadzika bhizinesi kodhi base uye nekukurumidza kwemipiro yemunharaunda.
Iyo yakavhurikaSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise (SLE) kodhi mabhesi, kwete chete kugovana masosi, asiwo kupa iyo SUSE Linux Enterprise mabhainari kuti aiswe mune yakavhurikaSUSE Leap.
Muchikamu chekutanga, inotarisira kubatanidza mabhesi emakodhi nzira yekuvhurikaSUSE Leap 15.2 uye SUSE Linux Enterprise 15 SP2, kana zvichibvira, pasina kurasikirwa nekushanda uye kugadzikana kwezvose zviri zviviri.
Muchikamu chechipiri, muchienderana neiyo yakasarudzika vhezheni ye openSUSE Leap 15.2, zvinokurudzirwa kugadzirira yakasarudzika vhezheni inoenderana nemafaira anoshanda yeSUSE Linux Enterprise uye isunungure yepakati vhezheni muna Gumiguru 2020.
Muchikamu chechitatu, muna Chikunguru 2021, zvakarongwa kuumba yakavhurikaSUSE Leap 15.3 kuburitswa, nekumisikidza uchishandisa SUSE Linux Enterprise mafaera anobatika mairi.
Uchishandisa iwo mapakeji akafanana zvicharerutsa kutama kubva kune imwe kuendesa kune imwe, ichaponesa kuunganidzwa uye kuyedza zviwanikwa, kubvisa zvinetswa mune mamwe mafaera (misiyano yese inotsanangurwa padanho refaira faira ichave yakabatana), uye zviite kuti zvive nyore kutumira nekugadzirisa mameseji ekukanganisa (anotendera iwe kuti ubve pakuongorora seti dzakasiyana dzemapakeji ).
kuvhuraSUSE Leap kuchasimudzirwa neSUSE senge chikuva chekuvandudza munharaunda uye vadyidzani vekunze. Kune vashandisi ve openSUSE, shanduko inobatsira nekuti kugona kushandisa yakagadzikana indasitiri yekuparadzira kodhi uye zvakanaka-akaedzwa mapakeji. Iwo matsva anofukidza mapakeji akabviswa anozove akajairwa uye akanyatso kuyedzwa neiyo SUSE QC timu.
Isu tinodada nekuona Leap uye Tumbleweed ichikura uye ichichinja, padivi peSUSE Linux Enterprise.
Uku kuedza kwevanjinjini vedu vanoshanda pamwe nevamwe munharaunda yeOverSUSE kunobatsira munhu wese anobatanidzwa kwemakore mazhinji anouya.
Iyo yekuchengetera openSUSE Tumbleweed icharamba iri chikuva chekugadzira mapakeji nyowani yekuvhuraSUSE Leap uye SLE. Maitiro ekuchinjisa shanduko kune epakeji mapakeji haachinje (muchokwadi, pachinzvimbo chekunyora kubva kuSUSE src mapakeji, isu tinoshandisa kunze-kwe-bhokisi-mabhinari mapakeji).
Zvese zvakagovaniswa mapakeji zvichaenderera zviripo kune Vhura Kuvaka Sevhisi kugadzirisa uye kugadzira maforogo.
Kana zvichidikanwa kuchengetedza kwakasiyana mashandiro yeakajairika maficha mune yakavhurikaSUSE uye SLE, yekuwedzera mashandiro anogona kuendeswa kune chaiwo openSUSE mapakeji (yakafanana nechiratidzo chekuparadzanisa chinhu) kana kuti uwane kuiswa kweinodiwa mashandiro muSUSE Linux Enterprise.
Mapakeji eRISC-V uye ARMv7 zvivakwa zvisina kutsigirwa neSUSE Linux Enterprise zvinokurudzirwa kuti zvinyorwe zvakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Kutanga kwakagadzirwa kubatanidza basa pakati pekuvhuraSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise